Makaton na Wentworth Primary
N'ebe a na Wentworth anyị na -anabata Makaton ka ọ bụrụ ụzọ anyị na ụmụaka niile ga -esi akparịta ụka, ọ ga -amasịkwa itinye ndị nne na nna na ndị nlekọta ihe niile enwere ike. Anyị bu n'obi ịkụziri ụmụaka na ndị ọrụ nọ n'ụlọ akwụkwọ akara ọhụrụ kwa izu wee kesara ndị nne na nna na ndị nlekọta na webụsaịtị ụlọ akwụkwọ ahụ. Site na ọnọdụ mkpọchi ugbu a, ọ dị nwute na anyị enweghị ike ịkụziri ha ụmụaka ozugbo n'ụlọ akwụkwọ mana anyị ekpebiela ịga n'ihu kesaa ha na webụsaịtị kwa izu ka gị na nwa gị kerịta. Anyị ga -amalite n'okwu na nkebi ahịrịokwu dịka 'hello', 'goodbye,' sorry ', ụlọ, ihe ọ ,ụ ,ụ, nri ehihie wdg. enwere ike gbaa ya ume ka a na -eji ya kwa ụbọchị na -enwe olile anya na nke a ga -aga n'ihu wee zụlite n'okike ka ọ bụrụ ahịrịokwu dị ogologo na ahịrịokwu zuru ezu ka a na -abịanye aka na ya ka a na -amụtakwu akara. Anyị nwere olile anya na ị ga -anụ ụtọ ma nabata ụdị nkwukọrịta ọzọ a na ezinụlọ gị niile!
Kedu ihe bụ Makaton?
Makaton bụ mmemme asụsụ pụrụ iche nke na -eji akara, akara na okwu enyere ndị mmadụ aka ka ha na -ekwurịta okwu.
Makaton dị mkpa taa dịka ọ dị na mbụ. A na-eji ya nke ọma na UK niile na ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ akwụkwọ, ebe, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ, yana n'ụlọ ndị nwere nsogbu nkwukọrịta na mmụta, ma emezigharị ya maka iji ya n'ihe karịrị mba 50 ka ị wee na-eji Makaton na ndụ kwa ụbọchị n'amaghịdị ya!
Taa ihe karịrị ụmụaka 100,000 na ndị okenye na -eji akara na akara Makaton, ma ọ bụ dịka ụzọ isi zie ozi ma ọ bụ dịka ụzọ isi kwado okwu
Na mgbakwunye na ụmụaka na ndị okenye nwere nsogbu nkwukọrịta na mmụta yana obodo gbara ha gburugburu - dịka ọmụmaatụ, ndị nkuzi, ndị ọrụ ahụike, ndị enyi, ndị ọrụ ọha, wdg Maka ọha na -ejiwanye ọha na eze na -enyere aka nkwukọrịta.
E gosila Makaton na ọ bara uru maka ụdị mmadụ niile gụnyere ndị na -agbasi mgba ike nghọta, ndị na -amaghị aka ịgụ na ide, gụnyere ihe ọmụma ụtọasụsụ, yana ndị nwere bekee dị ka asụsụ agbakwunyere. Site n'iji Makaton, ụmụaka na ndị okenye nwere ike iwere oke ọrụ na ndụ, n'ihi na nkwukọrịta na asụsụ bụ isi ihe niile anyị na -eme ma na -amụta.
Ndị ọrụ Makaton gụnyere
Ndị nwere nsogbu mmụta ma ọ bụ nkwukọrịta
Makaton bụ mmemme asụsụ UK na -eduzi ndị okenye na ụmụaka nwere nsogbu mmụta ma ọ bụ nkwukọrịta. Onye ọ bụla na -ekerịta ndụ ya na -ejikwa ya, dịka ọmụmaatụ, nne na nna na ndị ezinụlọ ndị ọzọ, ndị enyi na ndị nlekọta, yana ndị ọkachamara mmụta na ahụike.
Ndị mmadụ na -azụlite asụsụ ha na nka mmuta
A na -eji Makaton na -akụzi nkwurịta okwu, asụsụ na nka ịgụ akwụkwọ na ụmụaka na ndị okenye nọ na mmalite nkwukọrịta na mmepe asụsụ. Usoro a haziri ahazi nwekwara ike inyere ndị na -amụ Bekee aka dị ka asụsụ ọzọ, na -enyere ha aka ikwurịta okwu ozugbo, ma na -akwadokwa mmụta ha.
Ụlọ akwụkwọ ndị isi
A na -eji Makaton eme ihe mgbe niile na ụlọ akwụkwọ ndị bụ isi, iji kwado ụmụaka niile ịzụlite nkwukọrịta, asụsụ na nka mmuta. Ọ na -akwado njikọta, ebe ụmụaka nwere nsogbu asụsụ na enweghị nsogbu nwere ike na -akparịta ụka, na -amụta ma na -egwuri egwu ọnụ karịa.
Ndị na -elekọta ụmụaka na ụmụaka
Enwere mbinye aka Makaton pụrụ iche maka ọzụzụ ụmụaka, dị maka ndị nne na nna, ndị ezinụlọ na ndị ọkachamara chọrọ ịbanye na ụmụ ọhụrụ na ụmụaka ha na -elekọta. Ịbinye aka mgbe ị na -ekwu okwu, egosila na ọ na -akwado nkwalite nkwukọrịta na nka asụsụ. Ọ nwekwara ike nye ndị na -elekọta ya nghọta dị ukwuu maka mkpa na mkpa nwa, nke nwere ike inye aka belata nkụda mmụọ.
www.makaton.org Ọrụ ebere Makaton
www.singinghands.co.uk Aka na -abụ abụ
www.wetalkmakaton.org Anyị niile na -ekwu makaton
www.morethanwordscharity.com Karịa Okwu Charity. Peeji gụnyere ịnweta nkuzi Makaton.